Bemasoandro Itaosy Misy manangana indray ilay pylone efa nolavin’ny mponina
Tsy miasa, tsisy vola, tsisy hohanina Ahiana ny hisian’ny fipoahana ara-tsosialy
Misy amin’ireo sekoly tsy miankina no manery ny ray aman-dreny handoa saram-pianarana. Ny 1-6 aprily no fotoana hitakiana izany ho an’ny ankamaroan’ny sekoly.
Tohana ara-tsosialy ao Toamasina Niditra an-tsehatra ny minisitry roa vavy
Ramatoa Minisitry ny Mponina sy ny Fiahiana ara-tsosialy, ny Minisitry ny Rano, Fanadiovana sy Fidiovana no nisolotena ny fitondram-panjakana aty Toamasina amin’ny fanatanterahana ny drafitra ara-tsosialy amin’ny hamehana (plan d’urgence social).
Andranonahoatra Zokiolona miisa 400 indray no hahazo fanampiana
Taorian’ireo zokolona 6 isaky ny Fokontany notolorana fanampiana teny Bemasoandro ho an’ny distrikan’Antananarivo Atsimondrano andro maromaro lasa izay dia zokiolona miisa 400 indray no fantatra fa hahazo izany ho an’ny kaominina Andranonahoatra raha araka ny fanazavan’ny Ben’ny tanana Rasamison Haja.
Varotra tapak’andro Maty ho azy anaty fihibohana ny akoho fakana nofony
100 isan’andro sisa ny akoho fakana nofony azon’ireo mpisehatra amin’izany hamidy eto amintsika raha nahatratra 500 isa teo aloha, haparitaka amina mpivarotra 6 ireo raha kely.
FASAN’NY KARANA Hody amin’izay ireo olona 200 nihitsoka tao
Miisa 200 hatreto ireo olona tokony hamonjy fodiana tavela etsy amin’ny toby fiantsonan’ny taxi-brousse Fasan’ny karana vokatr’ilay fihobohana nateraky ny fiparitahan’ny coronavirus.
Fakana fahazoan-dalana hody Niteraka fitangoronana be izay tsy izy
Tsy maintsy maka taratasy fahazoan-dalàna avokoa ireo olona hamonjy fodiana any amin’ny faritra raha araka ny tatitra navoakan’ny Antokon-draharaha Misahana ny Fitaterana an-Tanety na ATT omaly.
Misy miverina manangana indray raha somary nangingina kely teo aloha teo ilay pylone ao amin’ny kaominina Bemasoandro Itaosy,
distrikan’Atsimondrano rehefa nolavin’ny mponina tamin’ny heriny rehetra. Nitohy nanomboka ny talata teo indray ny fandokoana ilay trano misy azy sy ny fametahana ilay vy be izay tena atahoran’ny mponina iny ka nisy ny hetsika nataon’ireto farany nanoloana ny biraon’ny kaominina mba hampitsaharana izany. Ankoatra ireo vahoaka madinika mantsy dia ahitana sekoly telo raha kely indrindra manodidina ity trano kasaina hametrahana ilay pylone ity ka tsy vitsy amin’ireo ray aman-dreny ao an-tanàna no velom-panahiana ny amin’ny mety ho fiantraikan’izany amin’ny fahasalaman-janany sy izy ireo. Raha tsiahivina, efa nisy ny taratasy navoakan’ny kaominina ny 20 jolay taona 2018 mba hampitsaharana ny fananganana ity pylone ao Bemasoandro Itaosy ity mandrapisian’ny fifanarahana vaovao. Tsy mbola nisy akory anefa ny fifanarahana, tsy nisy ihany koa ny fakana ny hevitry ny mponina dia niainga indray ny asa ka tsy hanaiky intsony ny mponina, raha ny tafa nifanaovan’izy ireo tamin’ny mpanao gazety omaly. Raha araka ny fanapahan-kevitra farany moa dia nanambara ny Ben’ny tanànan’ny kaominina Bemasoandro nanoloana ilay orinasa hanao ny asa sy ny solontenan’ny mponina fa omena herinandro izy mba hieritreretany ary hamoahany didy mifandraika amin’izay.